အန်းဒရွိုက်သည် UC Browser ကို | Android အတွက် App ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » UC Browser ကို (အမြန်ဆုံးက်ဘ်ဘရောက်ဇာ)
UC Browser ကို (အမြန်ဆုံးက်ဘ်ဘရောက်ဇာ) APK ကို
android ဖုန်းများအတွက် UC browser ကို
UC Browser ကိုအကြောင်း
✔ Fast နှင့်တည်ငြိမ် download, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက်ဆာဗာကျေးဇူးတင်စကား။
✔မြန်နှုန်း mode ကို, စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲဗီဒီယိုများ, ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးပျော်မွေ့။
✔ဒေတာများကိုချွေတာရေး, ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသင်အလိုရှိသလောက် browse
✔ကြော်ငြာပိတ်ပင်တားဆီးမှုမရှိကြော်ငြာများနှင့်သန့်ရှင်းသောစာမျက်နှာများကို browse ။
UC Browser ကိုအဓိကအင်္ဂါရပ်များ
★ Fast Download,
★က Facebook Mode ကို
★ည Mode ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် downloads, တည်ငြိမ်။ မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျဆင်းသွားလျှင်အပြင်, UC Browser က breakpoints အားထံမှဒေါင်းလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပိုပြီး freezon စာမျက်နှာများမရှိပါ။ အဆိုပါ smoothest အင်တာနက်ကို surfing ခံစားပါ။
UC Browser ကို, ဒေတာချုံ့အညွှန်းတက်အမြန်နှုန်းနှင့်သင် celluar ဒေတာအသွားအလာတွေအများကြီးကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်။
ဒါကထူးခြားတဲ့ feature ကိုမခွဲခြားဘဲသင့်ကွန်ယက်အခြေအနေ Facebook ကိုဖွင့်အမြန်နှုန်း။ UC Browser ကိုအမြဲသင့်ကွန်ယက်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့လမ်းကိုတွေ့။
ညဥ့်အခါပိုပြီးအငြိမ့်ကိုဖတ်ရှုဖို့ညဥ့် mode ကိုပြောင်းပါ။
ယင်း App ကိုအင်္ဂါရပ်များအစာရှောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ဤဗီဒီယိုအားထုတ်စစ်ဆေး
အဘယ်ကြောင့် UC browser ကိုမဆို web browser ကိုထက်ပိုမြန်ပါသလဲ
အဆိုပါ UC Browser ကို app ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုအရှိန်နှင့်ဒေတာချုံ့နည်းပညာအသုံးပြုနေသည်။ ဒါဟာအစဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဒေတာချုံ့နှင့်တစ်ဦးအကောင်းဆုံးဒေတာအရင်းအမြစ်အဖြစ်ပေးပို့ခြင်းကူညီပေးသည်တဲ့ proxy ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုဆာဗာကူညီပေးနေနှင့်ပိုမြန်ဝန်အချိန်စေသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ UC Browser ကိုအလွယ်တကူကွန်ရက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံဖိုင်တွေ Format ကို multitasking နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေစဉ်အသုံးပြုသူကူညီပေးသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ UC browser ကိုလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် HTML5 web application ကိုရှိပြီးသောမိုဃ်းတိမ်ကိုစနစ်ကအစအသုံးပြုသည်။
ဒေတာများ၏ UC Browser- Compression ကို
UC browser ၏ဒေတာများကိုချုံ့ကျနော်တို့တခြားအလားတူ browser များနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်လျှင်မူကား, 2006 ကတည်းကထူးချွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ browsing နေစဉ်ဒေတာသုံးစွဲမှုလျှော့ချ, ငါအဘယ်ကြောင့်ထိုသို့အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အများဆုံးဆွဲယူတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနိုင်ပါတယ်။
UC Browser- တိမ်တိုက်စနစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
ကြောင့်မိုဃ်းတိမ်စနစ်, app ကိုမြန်ဆန်စွာပြေးနှင့်မိနစ်အချိန်အတွက်ရလဒ်တွေကိုပေးသည်။ အနီးဆုံးဆာဗာများမှဒေတာများဖြန့်ဝေသောဘရောက်ဇာကိုမိုဃ်းတိမ် system ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီ app တင်နှင့် browsing အတွက်မြန်နှုန်းဖြစ်ကြပြီးအလွန်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်သုံးနေစဉ်သင်အညွှန်းချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
UC Browser ကို (အန်းဒရွိုက်) Settings များ Download
: အဆိုပါ UC Browser ကိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံ download, setting များကိုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ï မက်စ် (အများဆုံး) Downloads
ï UC Browser ကို (အန်းဒရွိုက်) တွင်ဒေါင်းလုပ်၏တည်နေရာ။
ï ဒေါင်းလုပ်သတိပေးချက် Enable သို့မဟုတ်ပိတ်မည်။
အပြင်အထက်သုံးခုကနေ Android အတွက်အဆိုပါ UC Browser ကိုလည်းဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ setting များကိုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအား, ထို UC Browser ကိုအကောင်းဆုံးယင်း၏ download, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းလူသိများနေတဲ့ browser တခုဖြစ်တယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့က setup ကိုရှင်းပြသွားနှင့် Android များအတွက် UC Browser ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်း downloads, ၏နံပါတ်လျော့ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ဖို့ခြေလှမ်းတွေမီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဖိုင်၏တည်နေရာကိုရှာဖွေအချို့ပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒေါင်းလုပ်စဉ်အကြောင်းကြားစာကို enable သို့မဟုတ် disable လုပ်ဖို့ browser setting ကိုကောင်းသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိလည်းဖြစ်ကြသည်။
1. ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ android ဖုန်းပေါ်ရှိ UC Browser ကိုဖွင့်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
2. မီနူးတွင်, သငျသညျ (အနီရောင်သေတ္တာဘေးတွင်) ကိုအနိမ့်အခြမ်းမှာနေတဲ့ရေပြင်ညီမျဉ်းကြောင်းသင်္ကေတကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
3. သင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့ setting များကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
4. တစ်ဦးကလာမယ့်ခြေလှမ်းကိုသင်သွားပါဒီမှာ download, settings ကိုနှင့်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
5. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေါင်းလုဒ် settings ကိုဧရိယာသင်အလွယ်တကူသင့် preference နှုန်းအတိုင်းအမှုအရာကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်သောနေရာ, ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင်အမြန် Path ကိုဖြစ်ပါတယ်: ပင်မစာမျက်နှာ > အန်းဒရွိုက် > UC Browser ကို (က Android) ဒေါင်းလုပ် Settings များ
ဤတွင်လျင်မြန်စွာ Navigation လမ်းကြောင်းအသေးစိတ်ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
1. အဆိုပါပုံမှန် Path- ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်ဒေါင်းဖိုင်များ, ကိုကယ်တင်တည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
2. UC browser ကိုမက်စ် Download- အဆိုပါ max ကိုဒေါင်းလုပ် option ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာ run နိုင် downloads, ၏နံပါတ်ပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ max ကိုဒေါင်းလုပ်၏အများဆုံးကန့်သတ်ယခုအဖြစ်6ဖြစ်ပါတယ်။
3. နယူး Task- သငျသညျသစ်တစ်ခု task အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်
4. အော်တို Reconnect- ဤသည် UC Browser ကိုအကောင်းဆုံး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလိုအလြောကျကွန်ယက်နှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီပေးသည်။
5. Notifications- UC browser ကိုအလင်းနှင့်အသံအလင်းအိမ်ပုံစံအတွက်အသိပေးချက်များကိုပေးစွမ်းသည်။ ဒါဟာ download, တစ်ခုချင်းစီမှခြေလှမ်းအတွက်အသုံးပြုသူပြီးစီးဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
1 ။ သငျသညျယခုတစ်ပြိုင်နက် 20 ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်!
2 ။ လြယ္ကူရှာဖွေရေးနှင့်ပိုပြီးလှပသော interface ကို
3 ။ ရုပ်ဖျက် mode ကိုနှင့်အတူဘေးကင်း browsing အတွက်အတွေ့အကြုံ
အန်းဒရွိုက်သည် UC Browser ကို
40.5 ကို MB
100,000,000 - 500,000,000 downloads,
UCWeb Inc က
UC Browser ကို | အေးမြ ...
KKDiscovery - …
UC browser ကို UC Browser ကိုဟာ android UC browser ကို app ကို download, web browser ဝိုင်ဖိုင်
T-T ကချပ်မန်း says:
အောက်တိုဘာလ 26, 2019 မှာ 10: 49 ညနေ
ဒီ app ကအရမ်းကောင်းတယ်
Geremu bedasa yadeta says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2019 မှာ 6: 50 ညနေ
ငါသည်ဤ UC browser ကို apk ကိုခစျြ !!
နိုဝင်ဘာလ 21, 2018 မှာ 7: 31 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 11, 2018 မှာ 8: 51 ညနေ
ဒီဆောင်ပုဒ် bro ၏အမည်ကဘာလဲ
အောက်တိုဘာလ 4, 2018 မှာ 4: 23 ညနေ
ငါ ucbroswer ကိုချစ်
satyaranjan sahu says:
ဇွန်လ 16, 2018 မှာ 7: 47 ညနေ
Yeh app ကိုကျား jio ဖုန်းကိုငါ့ကို chalega